CCJP Inoita Hurongwa hweKupodza Mavanga
Chivabvu 14, 2009
Sangano reCatholic Commission for Justice and Peace, CCJP, rinoti rine hurongwa hwariri kuita munyika yose, hwekusangana nevanhu vakashungurudza pamwe nekushungurudzwa munguva yesarudzo dzegore rapera.
Chinangwa chehurongwa uhu ndechekuda kuvhara mikaha yakaitika pamwe nekuda kupodza mavanga akaitika munguva iyi.
Sangano iri rinoti riri kupa mukana kune vakatadzirana kuti vasangane vachikurukura kuti pave nekuregererana kuitira kuti vagarisane zvakanaka zvakare. CCJP inoti izvi zviri kuitwa kuburikidza neminamato kana makungano ari kurongwa mumatunhu akasiyana siyana munyika.
Vanhu vakawanda vakashungurudzwa uye kupondwa munguva yesarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika dzakaitwa muna Chikumi wegore rapera. MDC inoti nhengo dzayo dzinopfuura mazana maviri dzakapondwa munguva imwe cheteyo.
VaAlouis Chaumba ndivo nmutungamiiri weCCJP. VaChaumba vaudza Jonga Kandemiiri weStudio7 kuti vanoona iyi senzira chete yekuti vanhu vakwanise kurerutsa mitoro iri mumwoyo mavo.
Dzimwe Nhau Kubva kuStudio7...
Hurukuro naVaAlouis Chaumba